ပခုက္ကူတံတားအနီး လက်ပံချေပေါ်ရွာ က မြွေဘုရား မှ မြွေကြီး ၀ါဆိုလပြည်.နေ.တွင် သေဆုံးခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပခုက္ကူတံတားအနီး လက်ပံချေပေါ်ရွာ က မြွေဘုရား မှ မြွေကြီး ၀ါဆိုလပြည်.နေ.တွင် သေဆုံးခြင်း
လွန် ခဲ.တဲ.နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း က ရှေးဟောင်းဘုရားတစ်ဆူပြုပြင် ရာ မှ ရှေးဟောင်းပေါ်တော်မူ ဘုရား တစ်ဆူ ကို တွေ. ရှိ ခဲ.ကြ ပြီး ယ္ခု မြွေ ကြီး ကို ဘုရား အနီးမှာ တွေ.လို ဝေ ရာ ကို လွှတ် ပေးခဲ.ကြ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ. မြွေကြီးက ဘုရားဝန်း ထဲပြန် ပြန် လာနေ လို. ဘုရားဝန်းထဲမှာမွေးထား ကြပြီး မြွေဘုရား ဆို ပြီး နာ မည်ကြီး လာ ပါတယ်။ ပခုက္ကူ ညောင်ဦး နယ် မှ လူ အများ လာရောက် ဖူမျော်လေ.ရှိ ပါတယ်။ အဲ.ဒီဘုရား က ညောင်ဦီး က နေ လာလို. ပခုက္ကူ တံတား နာရောက် ရင် လက်ပံချေပေါ် ဆို တဲ. ရွာအနီး မှာ မြသိန်းတန် မြွေဘုရား ဆိုပြီး ထင်ရှား ပါတယ်။
ဒါနဲ.ဒီနေ.မြွေဘုရား ကို သွားရောက် ဖူးမြော် ရာ မှာ တော. တိုက် တိုက် ဆိုင် ဆိုင် မြွေ ကြီး သေဆုံးနေ တာ ကို တွေ.ရပါတယ်။ ရွာခံတွေကတော မြွေကြီး ဟာ သူတော်စင် ဖြစ်ပြီး ဘုရား ကို စောင်.ရှောက် နေ လို. ခုလို အခါကြီး ရက်ကြီး – ၀ါဆိုလပြည်. မှာ သေဆုံးတာ ဖြစ်တယ်လို.သဘောထားကြပါတယ်။
ဆရာမ ဒေါ်ခင်လှတင်အပြောအရ ဘုရားကျောင်းကန်တွေမှာ မြွေတွေ အစောင့်တွေ ရုပ်ကစိုးတွေ ဖြစ်ရတာ ဟာ အရင်ဘ၀က မသေခင်မှာ ကိုယ်လှူထားတဲ့ ဘုရားကျေုာင်းကန်တွေကို အာရုံပြုပြီး စိတ်စွဲမိလို့တဲ့။
ကျွန်မလည်း ကြားဖူးပါတယ် ….. သကြားလုံးကျော်ပြောသလိုပါပဲ …. ။
ဟင် ဒါဆို ကိုလှူခဲ့တဲ့ ဘုရား၊စေတီတွေကို စိတ်စွဲပြီးမသေရဘူးပေါ့နော်
လက်ပံခြေပေါ်ကနေ ပခုက္ကူကို ဇက်ကူးတာမှတ်မိသေးတယ်။၂၀၀၇ သံဃာ့အရေးအခင်းဖြစ်ဖို့ 
နံမည်ကြီးနေတာကြားပါတယ် ….. အခုတော့ ကိုယ်တောင်မရောက်ဖူးလိုက်ရသေးဘူး မြွေကြီးက သေသွား ပြီးတဲ့ … အင်းပေ့ါလေ သူလည်း ၀ဋ်ကျွတ်သွားတာပေ့ါ ….. မြွေတွေရှိတဲ့ ဘုရားတွေကို မဖူးဖူးသေးဘူး … ဖူးလည်း အဟီး ကိုယ်ကကြောက်တယ် ….
ကျမတို့သွားတုန်းက မြွေကြိးရှေ့မှာလက်အုပ်ချိထားတဲ့လူတစ်ချို့ကိုမြင်ဖူးပါတယ် ။
သဂျီးကို ကန်တော့တာထက်တော့ ကုသိုလ်အပုံဂျီးရမယ်…။
ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုကြောင့် သေဆုံးနေတာလဲ။ ဒီတံတားဆိုတော့ တံတားပေါ်မှာ သေဆုံးတာမို့လို့လားဟင်… ပဲခူးက မြွေပဲ မြင်ဖူးတယ်။
ဘုရားမှာရှိတဲ့ မြွေကြီး သေသွားတယ်ပြောလို့ ၀င်ကြည့်တာ မြွေကြီးလည်း မတွေ့၊ ဘုရားလည်း မတွေ့ပါလား…။ ကြာဖြူလည်း အဲ့ဒီ့ဘုရားကို မရောက်ဖူးဘူး တွေ့ဖူးချင်လို့ ၀င်ကြည့်တာ တံတားကြီးဘဲ တွေ့ရတယ် ………….။
မြွေက ဘာမြွေမျိုးတုန်း ..
ဒါက မတူအောင် မန့်ရမယ်ဆိုလို့ မန့်လိုက်ဒါဘာ ..
လုံးပါတ် ၈လက္မ လောက် ရှိ မဲ. အရွယ် ရှိ စပါးကြီးမြွေမျိုး ပါ။
ရှိ ပါတယ် ခုဆို တံတားပေါ်မှာ ဆိုင်းဘုတ် နဲ.လမ်းညွန် ထားသေး
သူ့ အမလာမယ်ဆိုတော့ဖြင့် နောက်ထပ်မြွေရောက်လာအုံးမှာပေါ့။
အင်း မနေနိုင်လို့ ဝင်မန့်လိုက်ပါတယ်။ အမှန်တော့ အခုနောက်ပိုင်း ဘုရားပုထိုးတွေမှာ မြွေကြီးတွေကို စည်ကားအောင်ဆိုပြီး မွေးထားတာ အကျင့်လိုဖြစ်နေပါပြီ။ တော်တော်များများ လဲတွေ့နေရပါတယ်။ တခါတလေ တမင်ရအောင် ရှာထားတာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ထူးဆန်းအံ့ဖွယ် miracle ဆိုတာကို အတိုင်းအတာ တခုအထိ လက်ခံပေးနိုင်ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း ဟာတွေက တမင်လုပ်လာတာ များပါတယ်။ ခုနပြောသလို ရှိခိုးနေသူတွေရှိတာ ရင်လေးစရာပါ။ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာသာရေး ဗဟုသုတရှိအောင် ဖြည့်ဆည်းသင့်ပါတယ်။ အဓိကက အသိတရား ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်းလို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုစံလှကြီးရဲ့ ကွန်မင့်ကို အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျို့ ။ အဲဒီလိုမျိုး ပြောတတ်ချင်တာဗျ ။ အစိမ်းပြခဲ့ပါတယ် ။
ဘုရားမှာ နေတဲ့ မြွေက တန်ခိုးရှိတဲ့ အစောင့်တဲ့ ..